Xulufada Sacuudiga uu hogaamiyo oo ku hanjabay inay weerari doonaan Xudeyda… – Hagaag.com
Xulufada Sacuudiga uu hogaamiyo oo ku hanjabay inay weerari doonaan Xudeyda…
Posted on 13 Juunyo 2018 by Admin in World // 0 Comments
Dowlada Imaaraatka Carabta ayaa ku hanjabtay in ay weerar xoogan ku qaadi doonto magaalada dekadda leh Xudeydah ee dalka Yemen hadii aysan si deg deg ah uga bixin magaaladaasi kooxaha Xuutiyiinta oo hada maamula.
Imaaraatka ayaa Waqti kama dambeys ah u qabtay kooxda Xuutiyiinta in ciidankooda kala baxaan magaalada Xudeydah, waxa ayna Dowlada Imaaraatka sheegtay hadii xal kale la waayo in awood adeegsan doonaan.
Wasiiru Dowlaha arrimaha dibadda dowlada Imaaraatka, Anwar Gargash, ayaa sheegay in dulqaadka ka dhamaaday Xulufada ay hogaamiyaan Sacuudiga iyo Imaaraatka, kuna qasbayaan Xuutiyiinta in ay ka baxaan magaalada Xudeydah.
Xulufada Sacuudiga iyo Imaaraatka ayaa horey mudo 48-saacadood ah ugu qabtay Kooxda Xuutiyiinta ah in ciidankooda kala baxaan magaalada Muhiimka ah ee Xudeydah , hasa ahaatee Xuutiyiinta ayaa wali dhagaha ka fureesanaya dalabyada Xulufada.
Dekadda magaalada Xudeydah ayaa hada ah halka ay ka degaan gargaarka Bini’aadanimo ee la gaarsiiyo dalka Yemen, waxaana Qaramada Midoobay sheegtay in halis galeyso nolosha 250,000 kun oo qof hadii Isbaheysiga weeraraan magaaladan Dekadda leh.
Dowladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay in ay isku dayi doonto in ay ku qanciso xulufada uu Sacuudiga hogaamiyo in aysan weerarin magaalada dekadda leh ee Xudeydah, waxa ayna Britain tilmaantay in weerarka magaaladaasi dhibaato badan laga dhaxli karo.